Ikhabhathi enejacuzzi yangaphandle kunye neembono ezintle - I-Airbnb
Ikhabhathi enejacuzzi yangaphandle kunye neembono ezintle
Indawo yethu epholileyo, yanamhlanje, nexhobe ngokupheleleyo ijonge kwilali yaseBruksvallarna. Imalunga ne-120sqm kwaye ineembono ezintle zeentaba. Emva kosuku lokutyibilika okanye ukukhwela intaba, cwilisa i-jacuzzi, ufudumale kwi-sauna okanye uphumle ngaseziko. Iindlela eziziimitha ezingama-200 kude.
Amava ale mihla kunye negumbi elipholileyo kwilali yokwenyani kunye ne-cross-country skiing mecca yaseBruksvallarna. Indawo yokuhlala ibekwe kwindawo yokuhlala enoxolo yezinye ii-chalets (stugor) ezinemibono emangalisayo yeentaba. Ibe:
-Ipaseji enendawo eninzi yokuxhoma iibhatyi ezimanzi kunye nokukhaba iibhutsi ezinkulu.
-Igumbi lokuhlala elikhulu eline-cable TV, indawo yomlilo, izitulo ezipholileyo kunye neesofa, kunye neefestile ezinkulu zebhayi ezinombono otshayelayo.
-ikhitshi elikhulu, elixhotyiswe ngokupheleleyo (elinemibono emihle) elinetafile yokutya yosapho kunye nezitulo ezisi-8, izitulo eziphakamileyo zabantwana, imicrowave, idishwasher, kunye nezixhobo zokupheka ezigcweleyo.
-Amagumbi okulala ama-3 ahlukeneyo lilinye lineewodrophu ezifakelweyo ezinehanger, ibhedi yabantwana iyafumaneka
-Izindlu zangasese ezi-2 ezahlukeneyo, ishawa kunye nendawo enkulu yesauna
- indawo yokuhlamba impahla eyahlukileyo kunye nomatshini wokuhlamba, isinki kunye ne-closet yokomisa
- ukufikelela kwi-jacuzzi pool yangaphandle. Amaxesha okusebenzisa i-jacuzzi ukuba kuvunyelwene nabahlali abaphezulu (ngokuqhelekileyo kuthi).
-Indlu ye-spa ecaleni kwe-jacuzzi, kubandakanya i-sauna enemibono ebanzi yeentaba kunye nentlambo, ishawari eyongezelelweyo, indlu yangasese kunye nendawo yokuphumla.
Iishiti kunye neeseti zetawuli zifumaneka ngentlawulo ye-SEK 125 ngomntu ngamnye, ngokuhlala.
Ukucoca kungabandakanywanga kwixabiso, iindwendwe kufuneka zicoce indlu ngaphambi kokuba zihambe. Inkonzo yokucoca iyafumaneka kwi-SEK 1000.
4.92 · Izimvo eziyi-160
I-Bruksvallarna yilali eyinyani yeentaba kunye nentliziyo ye-skiing yaseSweden enqumla ilizwe. Ebusika ngaphezu kwe-300km yeendlela zokuhamba ezidibanisa iBruksvallarna ukuya kwindawo eseleyo yeFunäsfjällen kunye neelali. Le lali inevenkile encinci, kodwa enezinto ezininzi, ivenkile yezemidlalo, ikhefi ebusika, kunye neehotele ezininzi ezisentabeni apho abantu abangengondwendwe banokutya khona.
Ngexesha lasehlotyeni nasekuqaleni kwekwindla i-Bruksvallarna isisiseko esihle sokuhamba ukuya kwiintaba ezithambileyo zaseSweden, kunye ne-mushroom, i-cloudberry kunye nokunye ukukha amajikijolo, kunye nokuhamba ngebhayisikili.
Jag och min fru Lisa bor i Bruksvallarna och älskar fjällen med längdskidåkning, fiske och vandring.
My wife Lisa and I live in Bruksvallarna and love the Swedish mountains with all the activities; skiing, fishing and trekking.
Sihlala kwigumbi eliphezulu eliphezulu ngexesha lasebusika (siyakuthanda ukutyibilika ekhephini), kwaye sinokunceda ngazo naziphi na iingxaki, iingcebiso okanye imibuzo. Xa singekho kufutshane nomkhathaleli wethu (stugvärd) uhlala ezantsi kwendlela.
Sihlala kwigumbi eliphezulu eliphezulu ngexesha lasebusika (siyakuthanda ukutyibilika ekhephini), kwaye sinokunceda ngazo naziphi na iingxaki, iingcebiso okanye imibuzo. Xa singekh…
Iilwimi: English, Français, Svenska